Khulisa Ukulethwa Kwakho NgePhakheji Lokuqinisekisa Lokuthumela Abathumeli Bamafu | Martech Zone
Izinkampani eziningi ezithumela i-imeyili azibukeli phansi ukuthi ukulethwa okungakanani kungayithinta kanjani inhlangano yazo. I-imeyili enhle, eyakhiwe kahle, futhi esebenza kahle kakhulu ingavuleka kufolda engenamsoco yomuntu obhalisile futhi ofisa ukuguqula nenkampani yakho. Leso yisimo esibi okufanele ube kuso.
Okubi kakhulu, ungahle ungaboni nokuthi ama-imeyili akho adluliswa engafuneki ngaphandle kokuthi usebenzisa i ithuluzi lokuqapha ibhokisi lokungenayo. Isincomo sami salokhu ngabalingani bethu ku 250ok, engibuye ngibasebenzise ukuqapha ukubekwa kwami ​​kwebhokisi lokungenayo. Benza lokhu ngokunikela ngohlu lwembewu bese beqapha lawo mabhokisi wokungenayo, bese bekubika ukuthi ngabe i-imeyili yakho ikwazile yini ukungena kuMhlinzeki Wenkonzo Ye-inthanethi ngamunye noma cha.
Idumela lakho le-imeyili lingathinteka yinoma yiziphi izingqinamba, kepha iningi lazo lifika ezinkingeni ezinhlanu:
Ukucushwa - ingabe isizinda sakho ne-imeyili yeseva yakho ilungiselelwe ukuze ama-ISP akwazi ukuqinisekisa ukuthi ama-imeyili avela enkampanini yakho ngempela?
Uhlu - ingabe amakheli akho e-imeyili avuselelwe, avumelekile, futhi angena ku-imeyili yakho? Uma kungenjalo, amathuba okubikwa njenge-SPAM aphezulu kakhulu
Idumela - ingabe i-IP yokuthumela yaziwa ngokuthumela i-SPAM ngemibiko engenamsebenzi? Ngabe sekuke kwavinjelwa ngaphambilini?
ivolumu - ngabe uthumela ivolumu enkulu yama-imeyili? I-imeyili eningi ithumela ngokuphelele ukuqapha okuqinile kwabathumeli.
Okuqukethwe - unamafulegi abomvu anamagama owasebenzisayo ku-imeyili yakho? Ngabe uthumela ama-imeyili ngobuningi anama-URL amabi, izizinda ezihlatshwe umkhosi nge-malware, noma ngabe awunaso isixhumanisi sokuzikhipha ohlwini kuma-imeyili akho?
Iphakethe Lokuqinisekisa Lokuthumela Abathumeli Bamafu
Uma uthumela ngaphezu kwama-imeyili angama-250,000 ngenyanga kanye nefayela le- Cloud Cloud yokuthengisa iklayenti, kufanele utshale ngokuphelele iphakethe labo lokufakazela ubuqiniso be-Sender, okuyisimiso esinamandla sokuqinisekisa ukuthi wandisa ukulethwa kwale milayezo kubhokisi lokungenayo. I- Iphakheji Lokuqinisekisa Lomthumeli inikeza okulandelayo:
Isizinda Esizimele - Lo mkhiqizo wenza ukwazi ukukwenza lungisa isizinda esisetshenziselwa ukuthumela i-imeyili. Lesi sizinda sisebenza njengekheli elisuka ekuthumeleni i-imeyili yakho. I-Salesforce Marketing Cloud iqinisekisa ukuthunyelwa kwakho kwe-imeyili kusetshenziswa i-Sender Policy Framework (SPF), i-Sender ID, ne-DomainKeys / DKIM.
Ikheli le-IP elizinikezele - Lo mkhiqizo unikeza ikheli elihlukile le-IP ku-akhawunti yakho ukuze idumela lakho libe ngelakho ngokuphelele. Yonke imilayezo ye-imeyili ethunyelwe ivela ku-akhawunti yakho nge-Marketing Cloud isebenzisa leli kheli le-IP. Leli kheli le-IP limelela iningi ledumela lakho lokuthumela.
Phendula Ukuphathwa Kwemeyili - Lo mkhiqizo ulawula izimpendulo ozithola kwababhalisile bakho. Ungabela izihlungi zemiyalezo engaphandle kwehhovisi kanye nezicelo zokuzikhipha ohlwini ezenziwa ngesandla.
Ngokwengeziwe, iphakethe liza ne- Ukufakwa uphawu kwe-akhawunti, lapho i-Marketing Cloud ikhiqiza i-akhawunti yakho nesizinda sakho osikhethile esiqinisekisiwe. Lo mkhiqizo uguqula ukugoqwa kwesixhumanisi nesithombe futhi ususe zonke izinkomba ze-Marketing Cloud ngokuthanda kwesizinda sakho esiqinisekisiwe.
Ividiyo Yephakheji Lokuqinisekisa Lomthumeli
Isizinda sakho sangasese senza ama-ISP akwazi ukugunyaza futhi axhumane ngempumelelo nezinkinga nombhalisi wakho ngokusebenzisa izihibe zempendulo. Ngaphakathi kwephakeji yokufakazela ubuqiniso be-Sender, kuzofanele usethe i-DNS yakho ukuze unike amandla izizinda ezimbalwa zokuthumela nokuphendula, kanye nokhiye bokuqinisekisa. Ngokuthunyelwa kwesizinda esingezansi, esibizwa nangokuthi ukuthunyelwa kwezoni, udlulisela ingxenye yesizinda sakho esivele ikhona Kumafu Wokumaketha njengengxenye yokumiswa kwesizinda sakho okuqinisekisiwe. I-Marketing Cloud isebenzisa kuphela isizinda esinqunyiwe ngemisebenzi efanele.
@ sample.domain.com MX Ivumela i-imeyili ukuthumela ngokusebenzisa amaseva we-Marketing Cloud
bounce bounce.sample.domain.com MX Amathrekhi ama-imeyili athumela futhi abhampa
uphendule impendulo.sample.example.com MX Ivumela ukuphendula ukuphathwa kwemeyili ukuphatha izihlungi nokudlulisa izimpendulo kumakheli athile
shiya shiya.sample.domain.com MX Ivumela ababhalisile ukuthi bazikhiphe ohlwini
isithombe isithombe.sample.domain.com I-CNAME Ukhomba kumaseva wesithombe se-Cloud Cloud
buka ukubuka.sample.domain.com I-CNAME Ukhomba Ekumakethweni Kwamafu Ukubuka Njengamaseva Ekhasi Lewebhu
ukuchofoza qhafaza.sample.domain.com I-CNAME Ukhomba ku-URL Yokuqhafaza Kwamafu wokulandelela ukuchofoza kokungena
amakhasi amakhasi.sample.domain.com I-CNAME Ukhomba kuMakrofoni we-Cloud microsite namaseva wekhasi lokufika.
ifu ifu.sample.domain.com I-CNAME Ukhomba kumaseva wekhasi lamafu we-Marketing.
mta mta.sample.domain.com A Ukhomba Ikheli lakho le-IP elizinikele
sample.domain.com I-TXT Iqinisekisa i-DKIM ne-DK Selector
@ sample.domain.com I-TXT Isimo se-SPF1 - SPF sigunyaza ukusingathwa kwe-bounce kubunikazi be-mfrom
bounce bounce.sample.domain.com I-TXT I-SPF1 yokusingathwa kwe-bounce
uphendule impendulo.sample.domain.com I-TXT I-SPF1 yokusingathwa kwempendulo
Ngokuqinisekile uzofuna ukuthola isitifiketi se-wildcard SSL sesizinda sakho se-Marketing Cloud ukuze usisebenzise futhi. Ama-akhawunti amiswe nge-SAP angasisebenzisi isitifiketi se-SSL akhombisa isizinda esivikelekile se-Marketing Cloud kuzakhiwo zezithombe kuMakhi Wokuqukethwe. Uma ufaka isithombe ku-imeyili, i-URL kusihleli ikhombisa ukusethwa kwesizinda sakho ngokwezifiso nge-SAP. Isixhumanisi sekhophi ekhasini lezakhiwo zesithombe sikopisha isizinda sangokwezifiso ukuze sisetshenziswe kuma-imeyili, amakhasi okufika, nakwisiphequluli.
Ikheli le-IP Ukufudumala
Lapho Iphakheji Lokufakazela Ukuthumela le-Sender selilungiswe ngokuphelele, amakheli athumela i-IP kufanele abe sekufudumele. Lokhu kwaziwa ngokuthi Ukufudumala kwe-IP. Lokhu kungenxa yokuthi ama-ISP awanalo idumela elihlotshaniswa nekheli lakho le-IP. Uma uqala nje ukuthumela yonke into ngokucushwa okusha, kunengozi enkulu yokuvinjelwa. Ukuxhumeka okuningi okuvela kumakheli amasha we-IP yimizamo yokuletha ugaxekile ongacelwanga noma enye imeyili engadingeki, ngakho-ke ama-ISPs asolisayo ngekheli elisha le-IP lokuthumela imeyili.
Udinga usizo? Ozakwethu nami ku Highbridge sethule ipulatifomu yethu, IP efudumele, Ehlanza idatha yakho, ibeke phambili ukuthumela kwakho, futhi ikunikeze ngohlu lwakho lomkhankaso namasheduli okunciphisa noma iyiphi ingozi yezinkinga zokulethwa nokusheshisa idumela lakho lokulethwa.
Douglas Karr, I-VP ye- Highbridge
Ama-ISP amakhulu kunawo wonke nabahlinzeki be-webmail bancoma ukuthi wakhe igama lokuthumela kunoma yiliphi ikheli le-IP ngokuthumela ngokunensa nangokuhlelekile ngamanani amancane, bese unyusa kancane ivolumu yakho yeposi efiselekayo kubasebenzisi babo. Leli gama lokuthumela libizwa ngokuthi yi- ukushisa or ukuhlangana phezulu kwekheli lakho elisha le-IP.
Umgomo ukwakha cishe izinsuku ezingama-30 zomlando wokuthumela ofiselekayo nedatha ukuze ama-ISP abe nomqondo weposi ovela kukheli lakho elisha le-IP. Isikhathi se-ramp-up singathatha isikhathi eside kunezinsuku ezingama-30 kwabanye abathumeli nesikhathi esifushane kwabanye. Izici ezinjengosayizi wohlu lwakho jikelele, ikhwalithi yohlu, nokuzibandakanya kwababhalisile kungathonya isikhathi esithathayo ukuze ikheli lakho le-IP ligcwale ngokuphelele.
I-Marketing Cloud incoma ukuthi ugxile ekuthumeleni kubabhalisi bakho abasebenza kakhulu nababambe iqhaza ngalesi sikhathi esibucayi ngoba kungaba isisekelo sokuqala sama-ISPs ukunquma amakheli wakho we-IP athumela idumela. Ukuhlehla kufaka phakathi ukuthumela inani elilinganiselwe lemiyalezo nge-IP ngayinye ngosuku, ngakho-ke kungadingeka ukuthi uqhubeke ulungise izindlela zakho zamanje zokuthumela njengengxenye yenqubo.
Uma unemibuzo noma udinga usizo ekusebenzeni ukuqapha ibhokisi lokungenayo noma udinga usizo ekuhleleni i- Iphakheji Lokuqinisekisa Lomthumeli, ungacela ukwakheka inkampani yami entsha, Highbridge. Siyi-Salesforce Partner entsha futhi senze lo msebenzi ngamakhulu ezinhlangano. Singasebenza nommeleli wakho we-Salesforce futhi sikulungiselele ngokuphelele, ufudumale, futhi uthumele ama-imeyili!
Tags: 250okUkufakwa uphawu kwe-akhawuntiisizinda ngokwezifisoabazinikezele ipukuhanjiswaukumiswa kwe-dnsuphawu lwe-imeyiliesphighbridgeip idip efudumeleukufudumala kwe-ipifu lokumakethaisizinda sangasesephendula ukuphathwa kwemeyilisalesforceSAPiphasela lokuqinisekisa lomthumelissl imeyilii-wildcard sslukuthunyelwa kwezoni